Hlaziya i-CC APNG yokuthumela ngaphandle > UVielhuber uDavid
Hlaziya i-CC APNG yokuthumela ngaphandle04
Kuqala uthumela ngaphandle * ifayile yefla kwiiPNG ezizodwa. Ukwenza oku, yiya kuThumela ngaphandle> Thumela iVidiyo / iMedia ... kwi-Animate CC kwaye ukhethe useto olulandelayo:
Ukuba ufuna ukungafihli nto, sebenzisa ukhetho Ukungahoyi umbala wenqanaba (yenza istayile se-alpha) kwaye ukhethe Ulandelelwano lwePNG kunye neAlfa (Umthombo woMdlalo) endaweni yokulandelelana kwePNG (Umthombo woMdlalo) . Ngoku singazidibanisa iiPNG ngoncedo lweapngasm. Ukwenza oku, siqala ngokufaka ingxelo yokugqibela:
Okokugqibela sibeka iifayile ezizodwa kunye:
Isantya kunye nenani lokuphindaphindwa koopopayi kunokulawulwa kusetyenziswa ukulibaziseka kunye neeparamitha zokuhamba . Ukuthumela ngaphandle oopopayi ngasemva, sikwenza lo myalelo ulandelayo ngaphambi kokudityaniswa, okugcina iifayile ngokulandelelana kwazo: